IKonsathi eKhethekileyo yaseShimomaruko Uta noHiroba VOL.1 |
Shimomaruko Uta no Hiroba Special Concert VOL.1 Masenze iintyatyambo ziqhakaze ngeengoma!
Ukusebenza kwengoma egcwele imvelaphi evezwe nguTakehiko Yamada ibuyile okokuqala kwiminyaka emibini!
Kunye nemvumi eselula ebifunda kwaye iphucula ukusuka kwisizini edlulileyo, siya kuhambisa i-medley ekhethekileyo elungiselelwe nguTakehiko Yamada malunga nalo msebenzi.
Ngamana isipha seengoma esichukumisayo singafikelela kuwe ♪
Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
UToma: Ukususela kwi-opera "Hamlet", "Nceda uhlanganyele nam njengomntu odlala naye."
UCharpentier: "Ukususela ngaloo mini" kunye nabanye abavela kwi-opera "Louis"
Takehiko Yamada (ipiano / inkqubela)
UEri Ooto (soprano)
UYoshie Nakamura (soprano)
UYuki Akimoto (Mezzo-soprano)
Umhla wokukhutshwa: Epreli 2022, 4 (NgoLwesithathu) 13: 10-
Uthweswe isidanga kwiYunivesithi yaseTokyo yezoBugcisa, kwiSebe lokuBumba, kwaye ugqibe isidanga seSikolo sokuBumba. Ngo-1993, wangena kwisebe lokukhapha ipiyano ye-National Academy of Music eParis njengomfundi wamazwe ngamazwe oxhaswa ngurhulumente waseFransi, kwaye waphumelela kwiintlobo ezisixhenxe zeemviwo ezivulekileyo zokuphumelela kwiklasi enye kunye nebhaso lokuqala (Premier Prix) phezulu. yejury.Idlalwa njenge-soloist kwi-7e2m, i-L'itineraire, i-Triton2, njl. njl., ezingamaqela e-French performance, kunye nomculo wangoku.Kwakhona wanikela umsebenzi othunyiweyo wesiHebhere kwisikhumbuzo seminyaka engama-2 yemfazwe yaseReims, emantla eFransi.Emva kokubuyela eJapan, wadlala nabadlali abaninzi njengomdlali wepiyano, wafumana ukuthandwa njengeensemble echanekileyo nehamba lula, kunye neethowuni ezimibalabala, kwaye wafumana intembeko enkulu njengeqabane elicula yedwa kwiikonsathi, urekhodo kunye nosasazo. Ukususela ngo-50, ube ngumlawuli womculo we "Imagine Tanabata Concert" kunye nomkhosi we "Shimomaruko Classic Cafe" ukususela ngo-2004. Uye wathatha inxaxheba ekucwangcisweni kweekonsathi ezizodwa.Ubephethe ikhosi yokuqamba kunye nepiyano kwiKholeji yoMculo yaseSenzoku Gakuen, kwaye ngoku ungunjingalwazi kwiyunivesithi enye.Ilungu elithe rhoqo le-All Japan Piano Instructors Association, umlawuli weJapan Solfege Research Council, kunye nelungu leJapan Piano Education Federation. Kwi-2007, wasebenza njengomlawuli womculo kwi-2017th yeminyaka ye-Asakusa Opera, "Ah Yume no Machi Asakusa!", Umsebenzi owenziwe ixesha elide owahlala inyanga, kwaye walungiselela kwaye wenza zonke iingoma. Unjingalwazi umenyiwe kwiYunivesithi yaseTokyo yezobuGcisa ukusukela ngo-Epreli ka-1.
Uphumelele kwiYunivesithi yaseTokyo yoBugcisa.Wagqiba inkqubo ye-master's kwisikolo esinye sabaphumeleleyo.Ufumene i-scholarship yase-Italiya kwaye wafunda phesheya kwi-Italian National Parma Conservatory Master's Programme, egqibezela ngamanqaku agqibeleleyo kunye nendumiso.Ukongezelela ekudlaleni indima kaPamina kwintsebenzo yesikolo ye-Aichi Triennale "I-Flute yomlingo", uye wandisa intsimi yakhe yokusebenza ngokusebenza njengengqungquthela yendima yeChlorinda kwi-2021 yeNew National Theatre eyona nto iphambili "Cenerentola" .Uchongelwe uKhuphiswano lwe-7 lweShizuoka International Opera.I-16 ye-Asahikawa "Idolophu ye-Snow-Clad" i-Yoshinao Nakada Memorial Competition ye-Grand Prize kunye ne-Yoshinao Nakada Award (indawo yokuqala).Ilungu leNikikai.
Uthweswe isidanga kwiYunivesithi yaseShimane kwiFakhalthi yeMfundo eKhethekileyo kwiKhosi yeZandi.Ugqibe iKlasi ye-Master 46 kwiziko loQeqesho lwe-Nikikai Opera.Ndifumene iMbasa yokuGqwesa ngexesha lokugqitywa.Ndisigqibile iSifundo soBuchule sesi-6 kwiziko loQeqesho lwe-Nikikai Opera.Ufunde phantsi kongasekhoyo uYoshiko Hamasaki, uIsao Yoshida, noMidori Miwa. Ufumene ibhaso loku-1993 kuKhuphiswano loMculo woMfundi we-Yamaguchi Prefectural kwi-1.Ufumene iMbasa yokuGqwesa kunye noSodolophu weMbasa yeTaketa kwiRentaro Taki Memorial Music Festival.Ufumene ibhaso loku-8 kuKhuphiswano loMculo lwe-JILA lwesi-1. Ngo-2002 i-Arhente yeMicimbi yeNkcubeko iqeqeshelwa umsebenzi wasekhaya.Ikhethelwe icandelo lokucula kuKhuphiswano lwama-26 lweSogakudo lwaseJapan.Uchongelwe uKhuphiswano lokuqala lweKozaburo Hirai Vocal.Ilungu leNikikai.
Uphumelele kwiKholeji yoMculo yaseKunitachi kwaye wagqiba ikhosi ye-opera eyedwa ngaxeshanye.Ugqibe ikhosi yomculo we-opera yabafundi abaphumeleleyo.Ndigqibe iNikikai Opera Training Institute (iMbasa eGqwesileyo kunye neMbasa yeNkuthazo).Kugqitywe iZiko loQeqesho leThiyetha yeOpera yeSizwe. Uqeqeshwe kwiZiko loQeqesho leTeatro alla Scala eMilan kunye neZiko loQeqesho eliqhotyoshelwe kwi-Opera ye-Bavarian State nge-ANA Scholarship.Ukhethwe kwi-38th kunye ne-39th ye-Kirishima International Music Festival Awards kunye ne-16th Tokyo Music Competition Vocal Music Division.Ubonakale njengomdlali ophambili kwiiopera ezahlukeneyo kunye nemidlalo yomculo.Kulo nyaka, utyunjwe njenge-soprano solo ngu-A. Battistoni kwaye wakhethwa njengoSusanna kwi "Umtshato weFigaro".Ukufunda phesheya eBudapest, eHungary phantsi kweArhente yeMicimbi yeNkcubeko iReiwa unyaka wokuqala wenkqubo yoqeqesho lwamagcisa asakhasayo.Ilungu leNikikai.
Ugqibe inkqubo yenkosi kunye nenkqubo yobugqirha kwiYunivesithi yaseTokyo yoBugcisa.Ufumene imbasa yeMitsubishi Estate, iAcanthus Award, njl. kwiyunivesithi enye.Ufunde kwiRoyal Academy of Music eLondon, eNgilani njengomqeqeshi waphesheya kolwandle kwiArhente yeMicimbi yezeNkcubeko, waze wafumana idiploma yeopera. Ngo-2020, wenza umboniso wakhe wokuqala e-UK kwi-recital ye-Wigmore Hall, enye yeeholo zomculo eziphambili emhlabeni.Uphumelele iConsale Maronnier, Richard Lewis Awards, British Music Competition, njl.Yenziwe kwiKonsathi yeTokyu Gilvester, uMnyhadala woMculo waseTokyo Spring, iNissei Opera, iSeiji Ozawa Music Academy Opera Project, njl.Isakhono salo sokucula nobuchule bokudlala bujongwa kakhulu.
Wazalelwa kwisithili saseAichi.Uthweswe isidanga kwiKholeji yoMculo yaseKunitachi, kwiSebe loMculo weVocal, kwaye wagqiba iSikole soMculo seMculo, kwiYunivesithi yaseTokyo Gakugei.Uphumelele amabhaso amaninzi kuKhuphiswano loMculo waseJapan kunye noKhuphiswano loMculo waseTokyo, iNikko International Vocal Competition Grand Prize, kunye neSoleil Vocal Competition No.Kwi-Theater yaseTokyo Nikikai Opera, wayevunyiwe kakhulu ngokufezekiswa kwakhe kwiindima ze "Der Rosenkavalier" umculi we-tenor, "Alcina" Oronte, "Tripartite-Gianni Schicchi" Rinuccio, kunye no-1 "Lulu" Alva.Kwakhona, njengommeli weYu Music Planning, uye wabamba umboniso kwilizwe lonke. Ngo-2021, wabamba umsitho womculo wokwakhiwa kwakhona kwinyikima enkulu yaseMpuma Japan, kwaye wayalelwa nguMthunywa uHirono Yume ovela kwidolophu yaseHirono, kwiSithili saseFukushima.Umfundi we-Munetsugu Angel Fund wokufunda.Ilungu leNikikai.
Uthweswe isidanga kwiKholeji yoMculo yaseTokyo.Ugqibe iKlasi yeMasters yama-53 kwiziko loQeqesho lwe-Nikikai Opera njengomfundi wokufunda.Ndifumene iMbasa yeNkuthazo kwi-1st Juilliard School Vocal Audition kunye namanye amabhaso amaninzi.Ukuza kuthi ga ngoku, "Naruto akukho Lesithoba" (Tokushima, 2014), Aratani Japan-US Theatre (LA, 2015) wamenywa Robert Crowder Foundation, kunye Walt Disney Concert Hall wamenywa yi Japanese American Cultural & Community Centre. Wabonakala Beethoven kaThixo ". Okwesithoba" kunye ne "Choral Fantasy" ii-soloists kwi "Bridge to Joy" (LA, 2017). Uthathe inxaxheba kwi-NISSAY OPERA 2021 "La Boheme" njengomfundi njengoMarcello.Ilungu loMbutho wabaSebenzi beWadi yaseNerima.Ilungu lePeshawar-kai.
Ikonsathi Yiba nomfanekiso
Lo mboniso wawubanjelwe ngenjongo yokubonelela ngendawo abadlali abasebatsha abagqwesileyo ukuba bazilolonge, njengemidlalo yeqonga exhaswa nguMbutho kunye nemisebenzi yokukhuthaza ubugcisa benkcubeko e-Ota Ward, nokuxhasa nokukhulisa isizukulwana esilandelayo samagcisa.